दशैंमा पनि रंगशालाको काम नरोकिने ! | Hamro Khelkud
दशैंमा पनि रंगशालाको काम नरोकिने !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– दशैले सबैलाई छोइसकेको छ । यसको धार्मिक, सास्कृति महत्व त छ नै त्यसबाहेक मिठो खाने, राम्रो लगाउने, पिङमा रमाउने र आफन्तसँगको भेटघाट गर्ने दशैको अरु विशेषता हुन् । विदेशमा रहेका कतिपय दशैकै लागि स्वदेश फर्कने क्रम बढ्दो छ । यतिमात्र होइन, काठमाडौंबाट गाँउ फर्कनेको लर्को झनै बढीह हुन्छ ।
नेपाली खेलकुद पनि यति ठूलो महान पर्वबाट अछुत हुने कुरै हुदैन । तर, नेपाली खेलकुदलाई खेलाडीहरुको ठूलो चाड १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को चटारो छ । सबै योजना अनुसार भएमा आजको दुई महिना (मंसिर १५ गते) १३ औं सागको उद्घाटन हुनेछ । त्यसैलाई मध्य नजर गर्दै सागको तयारीमा रहेका खेलाडीलाई मात्र ५ दिनको विदा दिइएको छ ।
१३ औं सागको मुख्य आयोजना स्थल उद्घाटन र समापन दशरथ रंगशालामा हुनेत । तर त्यहाँको कामको गति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । कामको गति ढिला छ । जसका कारण समयमै साग हुनेमा शंका हुनु स्वभाविक हो । ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनिया कम्पनीले दशरथ रंगशाला कात्तिक १५ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिष्द (राखेप) लाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
तर, त्यो समयमा काम सकिनेमा शंका छ । जसको असर साग आयोजनामा पर्न सक्छ । तर, राखेपका सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवालले जसरी पनि कात्तिक १५ गते हस्तान्तरण हुने गरि काम भइराखेको बताउँछन् । उनका अनुसार दिउँसो काम गर्न केहि कठिनाई भएपनि रातीमा काम भइरहेको उनले बताए ।
‘हामीले युद्धस्तरमा लगातार काम गरिरहेका छौं । काम भएको छ कि छैन । तपाईहरु राति हेर्न आउन सक्नुहुन्छ । यो बीचमा नेपालीहरुको दुई ठुला पर्व परेका कारण हस्तान्तरण नहुने हो कि भन्ने शंका लाग्नु स्वभाविक नै हो ’ सदस्यसचिव सिलवालले दाबी गरे, ‘तर, काम नरोकियोस् भन्नका लागि भारतीय कामदार झिकाउने तयारी गरेका छौं । नेपालीहरु पर्वमा रमाउन गएपनि काम रोकिने छैन । कात्तिक १५ गते हस्तान्तरण, मंसिर ३ गते कुवेतविरुद्धको खेल र १३औं सागको उद्घाटन यही रंगशालामै हुनेछ ।’
विश्व कप छनोट अन्तर्गत समूह चरणको नेपाल र कुवेतबीच मंसिर ३ गतेका लागि खेल तय छ । सदस्य सचिव सिलवालले कात्तिक १५ गते रंगशाला हस्तान्तरण हुने आधार रहेको बताएका छन् । ‘पहिलो आधार प्याराफिटको पिलर तयार छ । मंगलबार र बुधबार भिआइपी प्याराफिटको बेसप्लेटको काम सकिनेछ । एक हप्तापछि त्यहाँको काम सुरु हुन्छ ,’ उनले थपे, दोस्रो आधार चिनिया राष्ट्रपतिको असोज २७ गते हुने भ्रमणले पनि चाडो सक्नुको विकल्प छैन । हामी दशै नभनी फुलपाती अष्टमी, नवमी र दशमी नभानी काम गर्नेछौं ।’
त्यो सकिएपछि भिआइपी प्यारापिटतर्फको छाना (आइरोनिक स्ट्रक्चर) को काम हुनेछ सिलवालले बताए । ‘सिट आइसकेको छ । दशै र तिहारको बीचमा सिटको काम सकिने छ , ‘उनले थपे, ‘त्यसपछि साउन्ड सिस्टम र इलेक्ट्रिक बोर्डको काम हुनेछ । त्यसै समयमा मैदानमा
दुबो रोप्ने र अन्य काम हुनेछ ।’ सदस्यसचिव सिलवालले राखेपमा सबैलाई आफ्नो खुसीमा बोल्ने अनुमति नदिएको पनि बताए । उनले भने ‘हामीले एकल स्टिमको प्रयास गरेका छौं । यो कामको गोपनियता पनि हो । सबैले बोल्न थाले काम बिग्रन्छ । सबैको जिम्मेवारी म छु । ’